"သွားစမ်းပါ ဒိုင်ယာနာ။ မင်းဟာ ဟောဒီ ၀ိုင်အရက်တွေလိုပဲ၊ ငါ့ဘ၀ကြီးတစ်ခုလုံးကို ယစ်မူးနေစေခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ငါဟာ မင်းကို ရူးမူးစွာ တပ်မက်နေခဲ့ရတာပေါ့။ ဗက္ခရဲ့ နှလုံးသားမှာ ဒိုင်ယာနာကလွဲလို့ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်မှ နေရာရှိမနေခဲ့သလို မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှလည်း မချစ်ခဲ့ဘူးဆိုတာ မင်းယုံကြည်ထားပါ ဒိုင်ယာနာ။ ထပ်ပြီးပြောမယ် ဒိုင်ယာနာ၊ ဗက္ခဆိုတဲ့ကောင်က မင်းဆီကအချစ်ကို မရရင် ရတဲ့နည်းနဲ့ကို ယူပြမယ်ဆိုတာ မင်း မြဲမြဲမှတ်ထားလိုက်ပါ ဒိုင်ယာနာ"
" မှတ်ထားရမယ်၊ ဟုတ်လား။ ဟားတိုက်ပြီး ရယ်မောပစ်လိုက်ချင်ပါရဲ့ ဗက္ခရယ်။ အချိန်ပြည့် သေရည်သေရက်ကို မူးရူးနေတဲ့ ရှင့်လို ငမူးတစ်ယောက်ရဲ့ လက်ထဲမှာ၊ ဒိုင်ယာနာ ဘ၀တစ်ခုလုံးကို ၀ကွက်အပ်ဖို့မပြောနဲ့၊ အိပ်မက်ထဲမှာတောင် စိတ်ကူးမကြည့်ခဲ့ဖူးဘူး ဗက္ခ။ ဒီမယ်ဗက္ခ၊ ရှင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲ ဒိုင်ယာနာကို ရယူဖို့ ကြိုးစားကြိုးစား၊ ဘယ်တော့မှ မရစေရဘူးဆိုတာ ရှင်တစ်ခါတည်း သိထားလိုက်ပါ"
"ဟား... ဟား... ဟား."
ဗက္ခ၏ ရယ်မောသံသည် ကျားတစ်ကောင်၏ ဟိန်းဟောက်သံကဲ့သို့ တောတောင်တစ်ခွင်လုံး ပဲ့တင်သံ ထပ်သွားခဲ့သည်။ ဗက္ခနတ်သားသည် ဒိုင်ယာနာနတ်သမီး၏ အချစ်ကိုရယူဖို့ နည်းမျိုးစုံကြိုးစားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အချည်းအနှီးသာ၊ နောက်ဆုံး ဗက္ခသည် ဒိုင်ယာနာ၏အချစ်ကို မရနိုင်မှန်း သိသောအခါ လမ်းမှာ တွေ့သမျှ လူများကို ကျားတစ်ကောင်လို ဖန်ဆင်းကာ ကိုက်စားရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ထိုအချိန်တွင် အလွန်တရာ ချောမောလှပသည့် အမီးသစ် (Amethyst) မည်သော လုံမငယ်တစ်ဦးသည် ဘုရားကျောင်းသို့အသွား ဗက္ခ္ခ နှင့် တန်းတန်းမတ်မတ် တွေ့လေသည်။
ဗက္ခသည် အမီးသစ်ကို တွေ့သည်နှင့် ကျားရဲတစ်ကောင်လို ဖန်ဆင်းကာ အမီးသစ်နောက်သို့ တစ်ရှိန်ထိုးလိုက်ခဲ့၏။
ကျားလိုက်ခံရသော လုံမငယ် အမီးသစ်သည် ပြေးရင်းလွှားရင်း သူမ ကိုးကွယ်သော ဒိုင်ယာနာနတ်သမီးကို တမ်းတခဲ့သည်။
"ကျွန်မကို ကယ်တော်မူပါ နတ်သမီးဒိုင်ယာနာ။ ကျွန်မရဲ့အသက်ဟာ အရှင်နတ်သမီးကယ်တော်မူမှသာ ချမ်းသာရာရတော့မှာပါ။ ကယ်တော်မူပါ နတ်သမီးဒိုင်ယာနာ"
ဒိုင်ယာနာနတ်သမီးသည် မနေနိုင်တော့ဘဲ လုံမငယ် အမီးသစ်ကို ခုန်အုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေသော ဗက္ခ၏လက်က ကယ်တင်ရန် အမီးသစ်ကို ကျောက်တုံးအသွင် ဖန်ဆင်းပေးလိုက်၏။
ဗက္ခ၏ တောက်ခေါက်သံသည် မိုးယံသို့ပင် ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ အချစ်စိတ်မွှန်၊ ဒေါသမာန် အထွတ်အထိပ်ကို ရောက်နေခဲ့သော ဗက္ခနတ်သားသည် အမီးသစ် ကျောက်တုံးကို ငေးကြည့်နေရင်းမှာပင် သူ၏ကြီးမားသောအမှားအတွက် နောင်တကြီးစွာ ရခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် ဗက္ခသည် အမီးသစ် ကျောက်ရုပ်တုရှေ့တွင် ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီး...
" ကျွန်ုပ် သိပ်မှားသွားခဲ့ပြီ လုံမငယ်၊ ကျွန်ုပ်၏အမှားတွက် အဖဘုရားသခင်နှင့် လုံမငယ် ခွင့်လွှတ်တော်မူပါရန်"
ဗက္ခသည် သူ၏စပျစ်ဝိုင်အရက်များကို အမီးသစ် ကျောက်ရုပ်တုပေါ်သို့ သွန်းလောင်းချလိုက်လေသည်။ ရုတ်ချည်းမှာပင် ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေသော ကျောက်သားသည် အလွန်လှပသော ခရမ်းရောင် ကျောက်သားအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားလေသည်။ ထိုခရမ်းရောင် ကျောက်သား အမီးသစ် (Amethyst)သည် နောင်အခါ ခရမ်းစွဲကျောက်အဖြစ် လူသိများလာခဲ့သည်။
ခရမ်းစွဲ (Amethyst) သည် ဂရိဒဏ္ဍရီထဲတွင် ဤကဲ့သို့ အစပြုခဲ့ကြောင်း လေ့လာသိရှိရသည်။
ခရမ်းစွဲသည် ဖေဖော်ဝါရီလဖွားတို့၏ အဆောင်ကျောက် ဖြစ်သည်။
ခရမ်းစွဲသည် စင်ကြယ်ခြင်း နှင့် စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ခြင်းကို လွှင့်ထုတ်ပေးသည်ဟု ယူဆကြသည်။ ၄င်းသည် ရမ္မက်စိတ် အပြင်းအထန် ခံစားရမှုနှင့် ဒေါသတို့ကို အေးငြိမ်းစေပြီး တစ်ဆက်တည်းပင် ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သည့် ပကတိဥာဏ်နှင့် စိတ်တန်ခိုးတို့ကို နိုးကြွစေနိုင်သည်။ ရောမလူမျိုးတို့သည် ခရမ်းစွဲ၏အရက်မူးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်မှုကို ယုံကြည်ရကား၊ ခရမ်းစွဲစီခြယ်မြှုပ်နှံထားသည့် ခွက်နှင့် အရက်ထည့်သောက်လေ့ရှိကြသည်။
ခရမ်းစွဲတစ်ပွင့်ကို ခေါင်းအုံးအောက်ထားအိပ်ပါက အိပ်မပျော်သည့်ဝေဒနာ ပျောက်ကင်းစေနိုင်သည်။ ဦးယဉ်းခေါင်းခဲနာ ခံစားရပါက နဖူးပြင်အလယ်တည့်တည့်တွင် ခရမ်းစွဲကို တင်ထားပါက ဝေဒနာ ပျောက်ကင်းစေနိုင်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ နဖူးပြင် ဗဟိုချက်သည် တတိယမျက်လုံး၏နေရာဖြစ်သဖြင့် ဤကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အကြားအမြင်ကိုပင် ရစေနိုင်သည်ဟု ယူဆပြန်သေးသည်။
ထို့ပြင် ခရမ်းစွဲသည် အသားအရေကို ကောင်းစေသည်၊ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို တားဆီးနိုင်သည်ဟုလည်း ယုံကြည်ကြ၏။
ခရမ်းစွဲသည် သလင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သလင်း (quartz)သည် ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုအားဖြင့် SiO2 ဖြစ်ပြီး၊ တြိဂုဏ်စနစ်တွင် ပုံဆောင်သည်။ သိပ်သည်းဆ 2.65၊ မာဆင့်7နှင့် အလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်း (R.I) 1.544 - 1.553 ရှိသည်။ သလင်းကို အရောင်မဲ့၊ အဖြူရောင်မှ အရောင်အမျိုးမျိုးအထိ တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ခရမ်းရောင်အမျိုးအစားကို ခရမ်းစွဲ(amethyst) ဟုခေါ်သည့် သလင်းစွဲ၊ စလင်းစွဲဟုလည်း ခေါ်ပြန်သေးသည်။ ခရမ်းစွဲတို့၏အရောင်သည် များသောအားဖြင့် အရည်မညီချေ၊ ပုံဆောင်ခဲ၏ထိပ်ပိုင်းတို့တွင် အရောင်ပိုရင့်(အရည်ပိုစွဲ)လေ့ရှိကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ ခရမ်းစွဲ၊သလင်းစွဲ ဆိုသည့် အမည်ရလာခြင်းပင်။
Amethyst ဟူသည့် အင်္ဂလိပ်အမည်သည် Amethustos ဟူသည့် ဂရိဝေါဟာရမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး "မယစ်မူးစေနိုင်" ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ခရမ်းစွဲကိုဆောင်ထားပါက အရက်သေစာ၏ ဆွဲဆောင်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အရက်သေစာကို မနှစ်ခြိုက်၊ အရက်သမား၊ အရက်၏ကျေးကျွန် မဖြစ်နိုင်ဟု ယုံကြည်ချက်မှ ဤအမည်ရလာခြင်းဖြစ်၏။
ခရမ်းစွဲ၏အရောင်သည် ပုံမှန် ခရမ်းရောင်မှ နက်ရှိုင်းသည့် ခရမ်းရင့်ရောင်၊ အနီရောင် ပိုသန်းသည့် မရမ်းစေ့ရောင်၊ ပန်းရောင်ကဲ့သို့ ဖျော့သောအရောင် စသည်ဖြင့် ခရမ်းရိပ် အမျိုးမျိုးသန်းနိုင်သည်။ ခရမ်းရောင်ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းမှာ မူလ SiO2 ဖွဲ့စည်းပုံတွင် အရောအနှောအဖြစ် သံဓာတ်အနည်းငယ် ပါဝင်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
အထက်က ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း စွဲရည်၊ အရည်စွဲ သဘာဝမျိုးသာမက အတန်းလိုက်၊ အလွှာလိုက် အရောင်အနုအရင့် ကွဲပြားခြင်းမျိုးလည်း ရှိနိုင်သေးသည်။ ပုံဆောင်ခဲကို ဘေးတိုက်ကြည့်ပါက အတန်းလိုက် အရောင်အနုအရင့် တွေ့နိုင်ပြီး၊ အပေါ်စီးမှ ကြည့်ပါက ထောင့်ချိုးများအတိုင်း အရောင် အနုအရင့်၊ ဇုံအလိုက် ကွဲပြားခြင်းမျိုးလည်း ရှိနိုင်သည်။
ထိုအခြေအနေမျိုးတွင် အကောင်းဆုံး အရောင်ရရန်အတွက် ကျောက်သွေးဆရာသည် အရည်စီးသည့်အပိုင်း ချွန်းထိပ်ထားပြီး သွေးရသည်။ ထိုအခါ ချွန်းပိုင်းမှ အလင်းပြန်ခြင်းနှင့်အတူ အရောင်ပါပါလာပြီး ကျောက်တစ်ပွင့်လုံး အလှဆုံးအရောင် ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
General Knowledge Jewels Knowledge